‘एनआईबिएल समृद्धि फण्ड २’ बिक्रिमा, आउदै कहिले ? – BUSINESSPANA.COM
‘एनआईबिएल समृद्धि फण्ड २’ बिक्रिमा, आउदै कहिले ?
नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक लिमिटेडको सहायक कम्पनी एनआईबिएल एस क्यापिटलले नयाँ म्युचुअल फण्ड निस्कासन गर्ने भएको छ । कम्पनीले बैशाख १३ गतेबाट नयाँ “एनआईबिएल समृद्धि फण्ड २” को बिक्रि खुल्ला गर्ने भएको हो ।
Previous: पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य फेरी बढ्यो
Next: नेपाली बजारमा आज पनि बढ्यो सुनको मूल्य, तोलाको कति ?